Farmaajo oo ku fashilmay qorshihiisii Gedo [Doorasho] | KEYDMEDIA ENGLISH
Farmaajo oo ku fashilmay qorshihiisii Gedo [Doorasho]
Is jiid-diid dheer kadib, ugu danbeyn doorashadii Gedo ee muddada Farmaajo seynta uga taagnaa, ayaa maanta ka billaabatay Ceel-waaq, waxaana kursiga 1-aad oo doorashiisa la qabtay ku guuleystay, Wasiirka Waxbarashasa Soomaaliya, Cabdullaahi Abukar Xaaji, oo ka mid ah shaqsiyadka aadka ugu dhow RW Rooble.
CEEL-WAAQ, Soomaaliya – Khilaafaad siyaasadeed iyo kala aragti duwanaan ku dhisnaa dano gaar ah, ugu danbeyn, Axmed Madoobe, ayaa Farmaajo kaga adkaaday doorashooyinka Gobolka Gedo, waxaana maanta magaalada Ceel-waaq ka billowday doorashada 16-ka kursi ee gobolka taalla.
Wasiirka Waxbarashada Xukuumadda Xil-gaarsiinta, Cabdullaahi Abuukar xaaji (Cabdullaahi Carab) ayaa ku guuleystay tartanka kursigii ugu horreeyay kaasoo tirsigiisu yahay HOP119, kadib markii uu u tanaasulay Musharax la tartamayay ee Cabdicasiis Cabdullaahi Ibraahim.
Inta badan musharixiinta doonaysa inay u tartamaan 11-kii kursi ee dhawaan Guddiga heer Maamul Jubaland [SEIT] shaaciyeen, kuwaas oo kamid ah 16-ka kursi ee deegaan doorashada 2-aad ee Jubbaland ayaa maanta gaaray Ceelwaaq halkaas oo isla-maanta lagu dooranayo 11-ka kursi.
Wafdi uu hoggaaminayo Guddoomiyaha Guddiga Hirgalinta Doorashooyinka heer Faderaal Muse Gelle Yuusuf, oo ay wehliyaan Xubno heer maamul, kuwo heer federal iyo guddiga Xallinta Qilaafadka, ayaa sidoo kale, ku sugan magaalada, waxaana la filayaa in shanta kursi ee baaqiga ah dhawaan la dhameystiro.
Tallaabadaan ayaa ka dhigan, in Farmaajo ku fashilmay damaciisii ahaa inuu boobo kuraasta Golaha Shacabka ee taalla Gedo, waana ifa-faalo kale oo ka marqaati kacaysa in aysan jirin wax rajo ah oo Farmaajo u suura galin karta, inuu dib ugu laabto xaafiiska ugu sarreeya dalka ee Madaxweynaha.
Madaxweynihii hore Farmaajo, aya dhawaan Garbahaarrey ka dajiyay xubno laga saaray FEIT iyo kuwo isaga taabacsan, si ay doorashooyin is-bar-bar socda uga dhacaan gobolka, hayeeshee, wuxuu ku baraarugsan yahay in xubnaha uu geeyay Garbahaarrey aysan heysan wax aqoonsi ah oo doorashooyinka la xariira.
Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka ee Heer Federaal FEIT, ayaa dhawaan xubnaha Guddiga ka tirsan ee ku sugan Garabahaarrey, uga digay in qaadan tallaabo aan waafaq-saneyn go’aankii guddiga ee ku aaddanaa in degaan doorashada labaad ee Jubaland loo wareejiyay Ceel-waaq.
Farmaajo, iyo Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Madoobe, ayaa muddo dheer ku kala argti duwanaa doorashada 16-kaan kursi, waxaana qeyb ka ahaayeen caqabadihii dib u dhigay doorashooyinka muddada sanadka ka badan, hayeeshee, ugu danbeyn RW Rooble iyo Guddiga doorashooyinka FEIT, ayaa gaaray xalkii ugu danbeeyay.